I-China yaBantwana i-Hardcover yokuPrinta ngeNhloko kunye noMvelisi weengubo zeeTawuli | Ushicilelo loLwazi
AbaNtwana beNcwadi eNzima yokuPrinta ngeNtloko kunye neMpahla yoTayile
Igama lemveliso: abantwana baprinta incwadi yokushicilela enentloko kunye neendwangu zomsila
Isixhobo: iphepha elihlanganisiweyo kunye / okanye iphepha elingelolakhe, ibhodi engwevu,
I-MOQ: Iikopi ezingama-300 ze-oda yesiko
Inkampani yethu ngumenzi wokushicilela eQingdao, CHINA. Ngamava acebileyo okuvelisa ngaphezulu kwe-16years, sinokunikezela ngamaxabiso angcono kunye nomgangatho kunye ne-MOQ esezantsi.
Kwabo bafuna ukupapasha incwadi, kukho iindlela ezahlukeneyo zokushicilela. Ukupapasha incwadi entsha kunokuba yinkqubo eyoyikisayo, kwaye kunokuba nzima ukubona eyona ndlela iprintiweyo ilungele iinjongo zakho. Nangona kunjalo, ukuqonda iingenelo kunye nokusebenza kweenkqubo ezahlukeneyo kuya kukunceda wandise inzuzo yakho.
Enye indlela ethandwayo yokushicilela ababhali abatsha kukushicilela kwethuba elifutshane. Le nkqubo ifuna ukuba zimbalwa iincwadi ezinokuyalelwa ngokuthelekisa ezinye iindlela. Olu hlobo lokushicilela luhlala lwenziwa ngokudijithali, kunokuba kwenziwe ngumatshini omkhulu wokushicilela.
1) Ukunciphisa inkunkuma
Le ndlela yokuvelisa ivelisa iincwadi ezimbalwa kakhulu kunezinye iindlela, ke ukuba iincwadi ezimbalwa zithengiwe kunokuba kulindelwe, ziyachitha iincwadi ezimbalwa. Ikwathetha iincwadi ezimbalwa ababhali ukuba basebenzise kwaye bazisasaze.
2) Iibatch ezincinci ezincinci
Le kuphela kwendlela yokuba umbhali avelise iincwadi ezimbalwa kakhulu. Ke ukuba zikho ikopi ezimbalwa ezifunekayo, le yeyona ndlela inexabiso eliphantsi lokuzifumana. Ukuba ugcina ufuna ezinye iikopi, unokuyalela ngokuphinda.
1) Iindleko zeyunithi ephezulu
Ukuba ufuna inani elikhulu leencwadi, ke kuya kufuneka ukhangele indlela eyahlukileyo kunokushicilela kwethuba elifutshane, kuba kuyakubiza kakhulu. Xa kuthelekiswa nokushicilelwa kwestokhwe, inani leencwadi, ixabiso liphezulu kakhulu.
2) Iindleko zeyunithi ephezulu
Edlulileyo: Iincwadi zokuhlobisa ziseti
Okulandelayo: Ushicilelo lweeMagazini zase-A4 zeMagazini